मोबाइल वालेट कम्पनी : पब्लिक कम्पनीमा जान तयार भएका हुन त ? – Padhnekura
मोबाइल वालेट कम्पनी : पब्लिक कम्पनीमा जान तयार भएका हुन त ?
‘फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन’ गर्ने कम्पनी भएकाले ग्राहकको विश्वास जित्न पनि पब्लिक कम्पनीमा जानैपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको विनियमावलीमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ भने ३ वर्षमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले यसको लागि पब्लिक कम्पनी हुने तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यसको लागि कम्पनीको व्यवसाय ठूलो बनाउनुपर्ने, नाफामा जानुपर्नेलगायतका कुरा हुनु अनिवार्य छ।
त्यस्तै, प्रभु पेले भने अहिले यो विषयमा सोच नबनाएको जनाएको छ। पब्लिक कम्पनीमा गएर आईपीओ जारी गर्न समय लाग्ने भएकाले यसको लागि समय लाग्ने प्रभु म्यानेजमेन्ट अध्यक्ष कुसुम लामाले बताइन्।
‘सबैभन्दा पहिला प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्छ’, लामाले भनिन्, ‘पब्लिक कम्पनी ३ वर्षमा नाफामा गएको हुनुपर्छ। अनि मात्र आईपीओ जारी हुन्छ।’
घाटामा रहेका कम्पनीहरुलाई कसैले पनि आईपीओ नकिन्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै आईएमई पेका सीईओ विकास नाहटाले वित्तीय संस्था भएकाले पब्लिक कम्पनीमा गएर आईपीओ जारी गर्ने सोच भए पनि समय लाग्ने बताए।
‘हामी यही आर्थिक वर्षका केही गर्छौँ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘समय लाग्छ। यसमा हामी जान्छौँ।’
आईपीओ जारी गर्न धेरै गाह्रो विषय भएको भन्दै त्यसको लागि व्यवसाय मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
सेल पेका सञ्चालक दिपक मल्होत्राले पनि राष्ट्र बैंकले तीन वर्षमा मोबाइल वालेटहरु नाफामा जाने नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यो व्यवसाय बैंक, वित्तीय संस्थाको जस्तो सजिलो आईपीओ आउने व्यवसाय होइन’, मल्होत्राले भने, ‘यसमा ३–४ वर्ष निरन्तर लगानी थपिरहनुपर्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक दुई हप्ताअघि भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ मार्फत ती कम्पनीहरुले तीन वर्षमा २० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
Source:- (Nepal khabar)
Previous विश्वविद्यालयहरुले वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर पठनपाठनका साथै परीक्षा गर्न सक्ने
Next कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने